Talyaaniga oo badbaadiyey kumanaan soo galooti ah - BBC Somali
Talyaaniga oo badbaadiyey kumanaan soo galooti ah
4 Maajo 2015
Ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga ayaa sheegaya in ay badbaadiyeen ku dhowaad lix kun oo soo galooti ah oo isku dayey in ay gaaraan Yurub. Dadkaasi waxa la badbaadiyey wixii ka dambeeyey sabtidii.
Afhayeen u hadlay ilaalada badda ee talyaaniga ayaa BBC-da u sheegay in hataan 17 hawlgal oo kala ah ay ka shaqeynayaan badda si ay u soo badbaadiyaan soo galootiga, waxaana lagu tilmaamay in uu yahay hawlgalkii ugu ballaarnaa sanadkan.
Maraakiibta talyaaniga ayaa waxa ay badda ka soo saareen 10 mayd. Waxa la sheegayaa in badda oo degan xiligan ay ku qaaday mukhalisiinta in ay ka faa’ideystaan badda oo ay isku dayaan in ay dad badan dhoofiyaan